ओली-प्रचण्डलाई चुनौती दिदै नेकपाका यी नेताहरुले मागे एमसीसीको डीपीआर, अब के होला ? — Sanchar Kendra
१काठमाडाैंमा तरकारी १८९ प्रतिशतसम्म महंगियो, कुखुराको मासुमा पनि रेकर्ड, मूल्यसहित
२आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
३माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
४कोरोनाको अर्काे लहर सुरु भएको भन्दै काठमाडाैंमा आजदेखि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, सबैले अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने
५भारतमा एकैदिन झन्डै ३ लाखमा कोरोना संक्रमण, हजारौँको मृत्यु
६बिहानैदेखि आकाश धुम्म बनेका बेला मौसमसम्बन्धि आयो यस्तो ताजा अपडेट, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
७आज रामनवमी पर्व, माडीमा सीतारामको मूर्ति स्थापना गरिँदै
८ओली सरकारले बल्ल दियो यस्तो कडा निर्देशन, जारी भयो सूचना
९थप १७३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ११ को मृत्यु
१०ओलीको कारवाहीपछि खनाल-नेपाल समूहले बोलायो सांसदहरुको आकस्मिक बैठक
११ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे मावोवादी केन्द्रले के गर्यो निर्णय ?
१२उच्च स्कोरका बाबजुद पनि नेदरल्याण्डसंग हार्यो नेपाल
११माओवादी केन्द्रले एकाएक किन गर्यो यस्तो निर्णय, अब के गर्छन ओली ?
१२मौसमबारे भर्खरै फेरी आयो यस्तो चेतवानी, सबैले थाहा पाउनुपर्ने, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
ओली-प्रचण्डलाई चुनौती दिदै नेकपाका यी नेताहरुले मागे एमसीसीको डीपीआर, अब के होला ?
काठमाडौँ । अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेपनि सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समितिका नेताहरुले झन् शंकास्पद दृष्टिले हेरेका छन् ।
पार्टीको बैठकमै चर्को कुरा उठाउने नेताहरुले बुधबार चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषण संग्रह सार्वजनिक गर्न राजधानीमा आयोजित पुष्पलाल मित्राता केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट अब एमसीसी अन्तर्गत सञ्चालित हुने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले दूतावासको स्पष्टीकरणको भरमा मात्र एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान नसकिने टिप्पणी गरे। चीनतर्फबाट आउने रेललाई रोक्न अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने रुट नुवाकोटबाट हेटौंडा, तनहुँ, पाल्पा हुँदै बुटवलको रुट रोजेको उनीहरुको आरोप छ।
‘हामीले चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेका छौँ। त्यही रेलको बाटोमा पार्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गरी परियोजना तय गरिएको छ,’ पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने। उनले एमसीसीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति जनाए। ‘प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै नुवाकोट रातमाटे पुर्‍याउने र त्यसपछि हेटौंडा हुँदै तनहुँबाट बुटवल पुर्‍याउनुको उद्देश्य के हो? यसबैबाट छर्लङ हुन्छ,’उनले भने,‘आयोजनाको डीपीआर चाहिन्छ।’
पोखरेलले एमसीसीको उद्देश्यबारे सञ्चारमाध्यम डराएको आरोप पनि लगाए। कार्यक्रममा नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसारभर साम्राज्यवादी गतिविधि बढि रहेकाले त्यसकै बाछिटाहरु आइपुगेको बताए। अर्का स्थायी समिति सदस्य न्यौपानेले समाजवादी बाटोमा जाने दिशामा सरकारका काम अघि नबढेको भन्दै अहिले आइरहेको विदेशी सहयोग सम्झौतामा प्रश्न उठाए।
केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले एमसीसी परियोजनामा संलग्न रहने अमेरिकी नागरिकलाई फौजदारी अपराधमा संलग्न भएपनि नेपालमा मुद्दा चलाउन नपाउने सम्झौताको सर्त आपत्तिजनक भएको बताए। सम्झौताकै सर्तहरुका कारण पछि नेपालमा आयोजना सुरक्षाका हाम्रो आफ्नै सुरक्षाकर्मीमात्र राख्न नपाउने अवस्था पनि आउनेतर्फ उनले सचेत हुनुपर्ने बताए।
नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु उपस्थित रहेको कार्यक्रममा एमसीसीमाथि नेताहरुले कडा कुरा गरे। तर कार्यक्रममा उनीहरुले चीन भने समाजवादको पवित्र उद्देश्यले संसारको मानव कल्याणका लागि अघि बढि रहेका भन्दै प्रसंशा गरे। उनीहरुले चीनले सञ्चालन गरेको बीआरआई सही खालको नीति भएको बताए। त्यस अवसरमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषणहरुको संग्रह भाग एक र भाग दुई सार्वजनिक गरेको थियो।
यता सभामुख पदका एकल उम्मेदवार अग्निप्रसाद सापकोटाको विषयलाई लिएर आन्दोलन नगर्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आग्रह गरेका छन् । सापकोटाले संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि द्वन्द्वकालीन समयमा व्यक्ति हत्याको आरोपी भन्दै विरोध भइरहँदा बुधबार दाहालको उक्त भनाइ आएको हो।
दाहालले सभामुखका एकल उम्मेदवार सापकोटाको विषयमा आन्दोलन गरेर दुःख नगर्न आग्रह गरेका हुन्। खुमलटारस्थित निवासमा दाहालले सभामुखमा सापकोटालाई प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले स्वीकार गरेको बताएका हुन्। ‘सिंगो राष्ट्र नै सभामुखका विषयमा एक ठाउँमा उभिएका बेला माइतीघरमा दुःख नगर्न,’ उनको आग्रह थियो।
‘हिजोसम्म आइपुग्दा सभामुखको विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ठाउँमा उभिइसक्यो। अब साथीहरुले किन दुःख गरेका हुन् जाडोमा,’ दाहालले भने। नेकपाले सर्वसम्मत रूपमा सापकोटाको नाम सिफरिस गरेको र प्रतिपक्षी दलहरूले समेत समर्थन गरेको अवस्थामा उक्त विषयमा आन्दोलन आवश्यक नभएको दाहालको भनाइ थियो।
सापकोटाका विरुद्धमा कुनै मुद्दा नभएको समेत दाहालले बताए। ‘उहाँमाथि केही पनि छैन। बेकारको कुरा हो त्यो। हाम्रो पार्टी त सर्वसम्मत निर्णय गरेर सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई अघि सार्‍यौँ। हिजो प्रतिपक्षी र अरु पार्टीले समेत उहाँलाई समर्थन गरिसकेपछि सिंगो राष्ट्र नै एक ठाउँमा भएको बेला माइतिघर मण्डलामा साथीहरूले दुःख नगरे हुन्थ्यो,’ उनले भने।
यसअघि बुधबार दिउँसो मावनअधिकारवादीहरूले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। ‘हत्या घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सभामुख नबनाउ, पीडितलाई थप अपहेलित र अपमानित नगर, मानव अधिकार र कानुनी शासनको सम्मान गर’ भन्ने नारासहित माइतिघरमा प्रदर्शन भएका थिए।
सभामुख निर्वाचनको घोषणा १२ गते हुँदैछ। सापकोटा एकल उम्मेदवार भएकाले उनी सभामुख हुने निश्चित भएको छ। उनलाई द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। उक्त मुद्दा सत्य निरुपण आयोगमा रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दालाई लिएर निवेदन परेको छ। सापकोटाले भने उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन्।
ओलीको कारवाहीपछि खनाल-नेपाल समूहले बोलायो सांसदहरुको आकस्मिक बैठक
ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे मावोवादी केन्द्रले के गर्यो निर्णय ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, के छ अवस्था ?
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले बालुवाटारमा मनाए धार्मिक उत्सव, को-को भए सहभागी ?
नासाका वैज्ञानिकले पृथ्वीबाट यसरी उडाए मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर, फोटो र भिडियोसहित